M/weyne Faroolle iyo masuuliyiin dowladda faderaalka katirsan oo xaflad soo dhoweyn ah loogu sameeyay London. – Radio Daljir
M/weyne Faroolle iyo masuuliyiin dowladda faderaalka katirsan oo xaflad soo dhoweyn ah loogu sameeyay London.
London,Feb 25 -Madaxwaynaha dowladda Puntland Dr Cabdiraxmaan Sheekh Maxamed Faroolle iyo madaxda dowladda faderaalka, maamulada Galmudug iyo Ahlu-Sunnah Waljeemaca ayaa xaflad soo dhoweyn ah loogu sameeyay magaalada London.
Xafladda ayaa waxaa soo qabanqaabiyay jaaliyadda Soomaaliyeed ee deggan dalka Ingiriiska,waxaana la cassuumay madaxdii Soomaaliyeed ee ka qaybgashay shirkii arrimaha Soomaaliya ee lagu soo gabagabeeyay magaalada London.
Madaxwaynaha dowladda Puntland Dr Cabdiraxmaan Sheekh Maxamed Faroolle oo xafladda ka hadlay ayaa waxaa uu sheegay xafladda inay muujinayso darreenka dadwaynaha ka qaybgalay xafladda ay ka qabaan geeddi socodka nabadda iyo dib usoo laabashada dalkii Soomaaliyeed ee burburay.
Madaxwaynaha ayaa waxaa uu tilmaamay madaxda dowladda faderaalka, Puntland, Galmudug iyo Ahlu-Sunnah Waljaamaca ee wadajira inaysan ahayn wax ku yimid si sahlan,balse ay ku timid dadaall dheer oo dhinaca nabadda iyo dib u heshiisiinta loo qaaday.
“Waad la socotaan marna waa lakala jeeday,marnka waa la isku soo jeesaday, mar aan kala jeednay oo ay idaacaha iyo inta war xummo sheegta ahi jirtay, laakiin mudadan dambe waa wada soconaa meel baan u wada jeednaa oo waxaa naga dhab ah oo naga go’an intaynaan wada socoto inaan Soomaaliya meel gaarsiinno”ayuu yiri madaxwayne Cabdiraxmaan Faroolle.
Madaxwaynaha dowladda faderaalka Soomaaliya Mudane Sharriif Sheekh Axmed ayaa isaguna ka hadlay xafladda,waxaana uu mahadcelin gaar ah usoo jeediyay dadwayniihii xafladda kasoo qaybgalay.
Madaxwayne Sharriif Sheekh Axmed ayaa dhinaca kalena tilmaamay inay ku dadaalayaan diinta islaamka inaan loo nicin falalka gurran ee Al-Shabaab.
Madaxwaynuhu waxaa sidoo kale uu tilmaamay dalka inuu soo maray abbaarro loona baahanyahay dalka inuu la dagaalamo jahliga si dadku ay horumar u gaaraan,isagoo hadlkiisa sii wata ayuu madaxwaynuhu sheegay gargaar wax barasho iyo muwaacwino in loo fidiyay Soomaaliya,dadwaynaha Soomaaliyeed ayuuna ka codsadayaan inay ka shaqeeyaan sidii dalka looga saari lahaa dhibaatooyinka kajirta.